Maansadiisu waa dawan, baaq, hodan, xigmad, murti iyo qaylo dhaan xilliga argagixiso jirto. Hadraawi wuxuu maansada ku kala furaa aqoontiisa cilmiyeed iyo kartidiisa hal abuurnimo. Wuxuu ugu hiiliyaa ninka laga gar daran yahay iyo ninka la dulmiyayo. Wuxuu Hadraawi la jaalyahay dadka maxaysatada ah, kuwa aan marnaba ka tegen hidahooda,iyo dhaqankooda, wuxuu kaloo la jaal yahay dadka diinta u dooda iyo cilmiga wax barashada. Hadraawi wuxuu ku lid yahay oo ka soo horjeedaa dadka-dadka dulmiya, booba,dhaca, yasa,xaqira, dadka is waaweyneeya, dhaqankooda tuura, muslimnimadooda ka taga.
Maansadiisu waa dawan, baaq, hodan, xigmad, murti iyo qaylo dhaan xilliga argagixiso jirto. Hadraawi wuxuu maansada ku kala furaa aqoontiisa cilmiyeed iyo kartidiisa hal abuurnimo.
Wuxuu ugu hiiliyaa ninka laga gar daran yahay iyo ninka la dulmiyayo. Wuxuu Hadraawi la jaalyahay dadka maxaysatada ah, kuwa aan marnaba ka tegen hidahooda,iyo dhaqankooda, wuxuu kaloo la jaal yahay dadka diinta u dooda iyo cilmiga wax barashada.
Hadraawi wuxuu ku lid yahay oo ka soo horjeedaa dadka-dadka dulmiya, booba,dhaca, yasa,xaqira, dadka is waaweyneeya, dhaqankooda tuura, muslimnimadooda ka taga.
Macalinkiisii ayaa inta uu dhenged dabada u qabtay ku yidhi. Habaaska inaad cantuugto Adoo hanadaan ka dooratay Xaggayga hibaan ku saaray Anigu ku habaari maayo Huqbaase ku raadinaysa Hibaaq xalan maad ahayne Hufnaanta dhibtii abuurtay Inaanay hadhayn yiqiinso! Hawaala adduun rabbaa og Dadkuna kala hoodo weeye Haddeer iyo tii haddeer Hadhow iyo tii hadhow Hoosiyo sare tii ku raacda Anuunbaa hooyadaaya.
Asmadiyo xanuunkiyo Aynfaadku saarraa Ma abaabulkii baa? Oohowda waallaa Ma dabkaan afuufee Aasee bakhtiiyaa Ololkiisu baxayaa? Kalgacaylku aafiyo Urugiyo dhib badanaa Kasha nugul ka adakaa Soo aarey nabarkii Ma alwadey sidii geel Edeg madhan ma deydeyey Sida bahal ma oogsadey Ma illaday kabtii jaan Ma ku jiitey awdalan Ma arooryadii baa?
Waabayda udugga leh Idin laygu shidi jirey Abbaartayda saakana Ma adeeridii baa? Sidaan aar libaax ahay Araggaygu didin jirey Arraweelo dumareey Arrimaha dhexdeenna ah Asaraari maayee Igu tidhi "ha ii iman" Anna waan hubaayoo Inaan uurka kaa jaro Afar iyo shan goor baan Axdi kuugu qaadoo Misna oofin waayee Isma ogiye goormaan Tolow aqalka soo galay?
Ma naftii ku eeddeed Obocdeeda karisee Ishu kaaga fagantaan Usha kaaga reebaan Igdhayee sabaayee Uubaale geeyeen Meelaanay kaa arag Ku ilaalinaayaa Soo jiidhay ooddii Ma adaahidii baa? Addinkaaga hoos taal Aburkiyo xarraankiyo Orka iyo mashxaraddiyo Alalaaska baxayaa Ma ujeeddadaasaa? Ma addoonsigeeda? Ajar kuugu sugan yahay? Arxanlaay karkabaddiyo Araggaygu murugiyo Yaanu umal ku saaqoo Anfariir ku geliyiyo Kugu noqon af kala qaad Arrintayda gabadh yahay Nin ambaday ka soo qaad Naftan oonku shidayee Deyn weydey ololkaa Amankaaga dhalisee Abhin iyo tusaaliyo Ergo waaya hadashiyo Imisaan karaankay La cuskaday aqoonta?
Ma waxaanan odhannoon Ka illaawey baa jira? Indhahaagu kululaa Eebadaadu toganaa Warmahaagu adakaa Arammida ku haysiyo Aanadaadu weynaa Yaad ka aarsanaysaa Ma nin aabbahaa diley? Nin astaamahaagiyo Quruxdaada oog iyo Ubax dharan ku sheegoo Ammaantaada koobaa Eed beeli waayee Erey tuurleh ruuxii Afka kaa yidhaahdiyo Utin nimaad ku leedahay Waa maxay abaalkii?
Arimada jacayl baa I hogaaminaysoo Misna kuma adkaystoo Kama hoydo aydoo Naftu olol ma deysee. Indhaaga habeenkii Ku ilaalinaayoo Dhammideed addunyada Afarteeda waaxood Hadba gees u eegee Aammusnow habeenkii Ug baadka iyo dooggaa Tiiraanyo ooyoo Idilkood xiddigahaa Afar qaaday socodkoo Ubax baan guroo Soo ururiyoo Amranow golii Ooddii madhnayd Ku ag daadiyoon Ku ilaa xidhoon Weheshada idhee Eedaanka diiggoo Oogsadey salaadiyo Waagoo iftiimaan Keligey inaan ahay Asaraar ka saaroon Addimada cuskadayoon Dib u soo arooree Qof ammaano lumiyoo Iibsadey xilkeedii Samo uguma aaye Aan kala war haynaan Ku afgooyey heestee Maxay adiga kula tahay?
Ma ogtahay barbaarreey Qalabkana bud dhumucliyo Waran iyo billaawaa Kuu baadi soocee Ma ogtahay barbaarreey Barshin iyo darfooley Bayluuli xaradhlaa Kuu baadi soocee Ma ogtahay barbaarreey Waxa loo buseelaa Ama qurux ku caan baxay Ama laysku baantaa Ama lagu bogsoodaa Kal bugtaa ku faydaa Kugu deeqa baashaal Guri bila ku magac dheer Hablaheenna bilicdiyo Biligiyo il-waadka leh Bilcantii shisheeya ah Ninka beegsanaayow Waxaan kaaga baqayaa Inaad baadi noqotee Cidla baylah keligaa Yaanu bahalku kaa helin Isu buri geyaankaa Barta gogoshu kuu taal Bahda lagama maarmaan Bud-dhiggaaga koowaad Baaqaygu waa kaas.
Buurrantu muuniyo Barkhad kaydsan maahee Barar taws ah weeyaan Bugtadiyo xanuunkuna Haddaan baadhay waa ciil Bahalow shabeelow Hooy bara baraalow Waaryaa nin buureed Bulsho waxay ku leedahay Beri waxaan ogsoonaa Adigoon ka soo bixin Casha boholaheedoo Dhirta baaxad-weynta ah Baarkeeda seexdee Maqlay inad bannaanniyo Timi badhaha hawdkoo Bulbullow libaaxii Boqortooyadiisii Duhur ugu badheedhoo Burjigii ka furatoo Bili qaadi weydee Beelahanagtaadaan Kaa soo bariidshoo Budulkay la soo galay Barkintaad ku jiiftee Waxba baadi xoolaad Beryahaas ma kulanteen?
Balse waxa la yaab dhalay Nin barwaaqo haystoo Ka engegan badhaadhee Bishmahaagu Caarrow Maxay kuu basaaseen Ma buskaad is-marisaa? Bahalow Shabeellow Hoy bara baraalow Waaryaa nin buureed Bulsho waxay ku leedahay Badda iyo nafleydii Balliyada ku noolayd Bogan waaye jiifkoo Wadnahaa babbanayoo Beerkaa legdamayee Xaggay bayr ka yeesheen Biyahana ma joogtaa? Bahalow Shabeellow Hoy bara baraalow Waaryaa nin buureed Bulsho waxay ku leedahay Maxaa haadda buubtiyo Baqayaha daruuraha Balwadiisu noqoteen Wax la baratamaa jirin Ama booddo lagu qaban Baqdintaada awgeed Bogga uga qadhqadhayaan Miyaad baalal leedahay?
Bahalow Shabeellow Hoy bara baraalow Waaryaa nin buureed Bulsho waxay ku leedahay Bari iyo Galbeedow Haddaad baahdey aashaa Qalwo bogox ku leedahay Bidixdana ku furan tahay Midigntana badhkaa yaal Nin boqol ku tala-galay Dhankee kaaga baydhaa? Dhinaceed u badan tahay? Barbarkee ka maqan tahay? Bismillaahi yaahuu- Degelyohow barkuma-taal Bulsho waxay ku leedahay Bisiq iyo xangeyiyo Banji iyo dharkayniyo Bilcilkaaga hawliyo Dhirta boocda mooyee Tolow baad la daaqiyo Miyaan cawsna kaa bixin?
Degelyoho barkuma-taal Bulsho waxay ku leedahay Beertaadu hoog iyo Bacad iyo habaas iyo Bacow iyo qaniin iyo Badso io shirqool iyo Burso iyo khiyaaniyo Beeraadka samihiyo U buseelka godobtiyio Boqon goynta nabaddiyo Booraanta jarankiyo Boholaha asaydiyo Cabsi iyo ma been baa? Biyaheedu dhiig iyo Xinjir bururinteediyo Ma baroorta dumarkaa? Balka iyo sabuulkuna Ma banbaane ololiyo Waran iyo billaawiyo Baaruudda huguntiyo Birta lagu idlaadaa?
Baaq baaqu daab iyo Bishil iyo ma soofaa? Waxa lagu bislaystiyo Badarkeedu dhimashiyo Baga iyo ku digashiyo Ma busaarad dhegalaa? Bahalow Shabeellow Hoy bara baraalow Waaryaa nin buureed Bulsho waxay ku leedahay Beryahaagan ka horow Bahda habar-dugaag yahay Marka ay biciidkiyo Koran buuran loogtaan Inta boodhku qariyaa Waxba yay badhkoodiyo Helin bawdo hiliblee Kolay biixii ruugaan Marka biidhi-qaatiyo Qawluhu is-boobaan mid afkii ka buux samay wax ka bililiqaystaan badanaa ma qadi jirin raqda baallaheediyo badka kama maqnaan jirin saw tan Buulalleydii ku bakhtiday ag-taadii.
Ragna biime weeyee Taladii bir lagu jaro Hadday baydu furatoo Xadhkaheedu buubaan Lama baraq nuglaadoo Bishmahaaga Qaysow Baqe lama qaniinee Waxa loo badheedhaa Biyo dhiijinteedee Haddaad bayr ka leedahay Biyo jira kashaadiyo Buro adiga kugu taal Boholiina lagu dhacay Ma bir baynu xidhannaa. Daalacan warkeedii Iyo faraskii Doolaal Dalan-doolka maansada Dar-dartiyo wacdarihii Sida danab u laba dhacay Dadku maqalyey shaalle.
Maansada dunteediyo Waxa lagu dir-soocdaa Degelkiyo dhirteedee Heellada ma danadiyo Dibowgaa ka gurataan? Murtidiinnu dakhariyo Dalab iyo lanlaamiyo Daldaloolo badanaa? Ma dareere miirtiyo Duddun bahal galeenaa? Dardartii aftahankiyo Dilladii farshaxankiyo Dux abwaan ma sidatoo Diiftii saboolkiyo Daal baa ka muuqdee Gabaygaba ma ducashiyo Dawersaa ku keentaan? Mise dagan ma dhaaftiyo Duul baa ka gadataan?
Dhul dellegan ka soo xada Mise luuq dahsoon iyo Suuqa doqon ma garatiyo Ku-dhacdaa ka dayataan? Marka geel dar loo horo Diin maxawgu heestaan? Haddii reerku lama dego Meel daaq ka dheer yahay Degel oomman furan yahay Dadka guriga joogiyo Waxay duunyo haystaan Diihaalka wada qabo Daruurana ka hooraan Meel durugsan goortaas Maxaa daanka oo qudha Ula doogsin carartaan?
Gudin-yahay dulbaaxdiyo Dufan lagu afeeyee Dareenkeedu laaciyo Milicsiga ku deexdee Danbarsiga cadceediyo Dabayoodka luunka leh Weligeed ku darartaa Maxaad doodad beeshiyo Danta qaranku leeyahay Dusduskaaga foofkiyo Damac uga hor marisaa? Noloshaba ma dirashiyo Damqashada calooshiyo Dalqadaa ka barateen? Midha-Daray raggiinaa Duudduub ku liqayow Kolley geedka duuggiyo Taariikh la daastiyo Laga diirto magac hadha Sida diirta xagatoo Dadnimada arradisee Dib maxaa u dhigateen Duniduba ma maantaa?
Maxaad uga didaysaa? Uga dhigi wax kuu daran. Armay doorba kuu tahay. Shilna wayna daan-weyn Demmanaanta kama foga Xoolaha dayacanta ah Inuu daayo mooyee Kam durugsanaan karo Doon-doonisteediyo Day-dayashadeeduna Darayada libaaxiyo Ninka damalka ka hadhsaday Deleb waw gudboon tahay Haddaan waayey doobkii Xilka doonnantiisa ah Dayrada u noqon laa Danyar habaqlaheeddii Duddo habalku kala tago Miyaan waayey deelkiyo Daba socodka qaylada Hayin sida dadweynaha Dalaggiyo dhaqaalaha Duuggiyo wixii nool Haddii layska dabo galo Hadduu aar dalaafiyo Arko belo ku soo diran Nafta dawdab roorka ah Daran doorri orodkiyo Durdurada ka buuxsado Maatada derderan iyo Deli iyo jar kala dhaco Dooggaan la maarayn Dibna looga soo kaban Didmadiisu keentee Haddaan waayey dabarkii Dhacdo lagu daweeyoo Lagu dagagaraa jirin Miyaan waayey doohdiyo Doobirtii la odhan jirey?
Danta guud mudnaanteed Gobonnimo daryeelkeed Damaciyo hankaygii Haddaan waayey dawgaan Is lahaa ha lagu dego Berri degel ma dhaafaan Dadka wada jirkiisiyo Isku duubnidiisii Lagu doorshey reer reer Kala daadsan laga dhigay Mus duleedku xanan yahay Qarannimadu dagan tahay Gudahana dab kaga kacay Dawankiyo carooggiyo Miyaan waayey Daalacan Sengehayga Doolaal Ama faras dirkiisa ah Dayax-weerar oo kale? Ragga daawadii furay Ama daacaddi jaray Ama qaranka duudsiyey Hantidii dadweynaha Dacallada ka buuxsadey Dalku eed ku leeyahay Rag la deydeyaayoo Dedan oo qarsoonoo Damacooda xeel iyo Ku darsaday tab hoosoo Wixii deyn ku soo baxa Berri diidi karayoo Dufankiyo karriinkii Iska duugey maahee Sida buurta Daalood Dal fog bay ka muuqdaan Diricaasi waa kuma?
Dawdar weeye shalay jirey Durba sawkan jeedladay Dhistay aqallo daah weyn Tolow duubka yaw xidhay Hadmuu tobanka doonyood Dekedaha ku soo xidhay Hadmuu dunida gaarkeed Intuu daawashaw tegey Demesh iy wixii yiil Sida daad u soo rogey? Kaftankaas dareenka leh Danyartaa ku heestee Dadka maanigaa baray Derejada hummaaga ah Magacyada dul-saarka ah Dorraad soo gadaal baxay Maxaa laygu digayaa? Maxay doqoniiino tidhi Maxaan dogob beer is idhi Wax aan degdeg jeer ku liqay Ummuuraha duur xulka ah Dal xiiska maxaan bilqaday Maxaan dihin weel la galay Maxaan dhilay doog lingaxan Maxaan dardaraa habeen Maxaan qoday doox sal weyn Wakhtigu boqol doocsanaa Rugaha dunidaa busho ah Dal iyo magac bay lahayd Iskuuladu waa dayeyn Diintay gibil saarayeen Xafiisyadu waa dullayn Dukaamadu waa nuxuus Daaruhu tayo waa ka gaal Shil baa dunidii ka dhacay Waxay dumiyeen aqoon Dagaalku sal buu lahaa Haddaad liqday daacadii Cilmigan dib u heego dhaca Ilaah lagu diidan yahay Islaam la dagaalka ah Danaysigu weel u yahay Damiirku ka meydka yahay Run baa lagu daahayaa Dijaal korayaa qaarsoon Dalaal iyo been madow Nin diidey inaad run tahay Rabbow dunidaada bilan Daayeerka waxaa ka yimi
abwaan hadraawi maansadii sirta nolosha
Posted on May 10, by Buqaqable. Hadalkana nin yidhi wa dhigaa siidhehbaa dilay Inaan dhaabadeeyaan rabaa dhawr kal dabadeed Dhaxalkeeda nimankii lahaa way dhebaandhebi Iyagaa dharaarab intaan dhaafay sii odhan. Hadalkana nin yidhi waa dhigaa siidheh baa dilay Inaan dhaabbadeeyaan rabaa dhawr kal dabadeed Dhaxalkeeda nimankii lahaa way dhebaan-dhebi Iyagaa dharaaraba intaan dhaafay sii odhan. Dhibaatada xilkeedii horaa ugu dhabcaasheene Maantana sidii dhagax dixeed hawgu sii dhegin Inta shay la dhawrtiyo haddaan diinta kugu dhaarsho Haddaan dhaar carriyo caaggan iyo dhaar cas kugu dhaarsho Inta gabay dhaf leeyahay haddaan kaaga dhira fuulo Haddaan dhaho haddaan dhigo haddaan weli dhiib-dhiibo Anigoon wax kuu dhimin haddaan dhegaha kuu buuxsho Dhaq-dhaqaaqa ma kaa iman karaa dhiillo lagu baajiyo. Dhabtuun baa khalqigu diidayaa meesha dheer tegaye Dhulgariirka waa laga baqaa waayo soo dhaxaye La dhex joogi mayo arlada dheelmashow qorane Qofba wuxuu dhigtaa baa u yaal dhiilka aakhiro Ninkii dhiiri sheegtow is furo waa dhanaan tahaye. Nala Wadaag.
Midha-Daray raggiinaa Duudduub ku liqayow Kolley geedka duuggiyo Taariikh la daastiyo Laga diirto magac hadha Sida diirta xagatoo Dadnimada arradisee Dib maxaa u dhigateen Duniduba ma maantaa? Mareegta raadraaca taariikhda,hidaha iyo dhaqanka Intii ay dhul weynaha Raggii dhoofay haysteen Sida awr dhufaanaa Usha laygu dhaqayoo Labadayda dhaban baan mid markay dhirbaaxaan ka labaad u dhigayoo intaas waan dhursugayee inta dhiisha qabada ah wuxuun iigu dhacayaan idinna maa Hadrsawi dhawrtaan? Hadday agaraadam tahay, Hor Illaahay adigiyo Hodan maysku aragteen? Ummuuraha toosay daawo, Barbarkee ka maqan tahay? Buurrantu muuniyo Barkhad kaydsan maahee Barar taws ah weeyaan Bugtadiyo xanuunkuna Haddaan baadhay waa ciil Gabagada shabeelow Hooy bara baraalow Waaryaa nin buureed Bulsho waxay ku leedahay Beri waxaan ogsoonaa Adigoon ka soo bixin Casha boholaheedoo Dhirta baaxad-weynta ah Baarkeeda seexdee Maqlay inad bannaanniyo Timi badhaha hawdkoo Bulbullow libaaxii Boqortooyadiisii Duhur ugu badheedhoo Burjigii ka furatoo Bili qaadi weydee Beelahanagtaadaan Kaa soo bariidshoo Budulkay la soo galay Barkintaad ku jiiftee Waxba baadi xoolaad Beryahaas ma kulanteen? Hadduu umal saaqa yeesho, Maadigaa awoodda leh Taladiyo ummuuruhu Gabsyada sidaad u aragtaa? Abshir-Bacadle gubashada, Jiilaalka gahangaha, Laaskiisu kama gudhin, Rafad gololadiisii, Googgoosyadiisii, Geeduu ku dari jiray.